निकासको एक मात्र विकल्प वार्ता
जनता आतंकित छन् । किनकि, देशमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट हुर्किएको र राज्यसत्तासँग असन्तुष्ट एक नेताको नेतृत्वमा अघोषित सशस्त्र विद्रोह अझै जारी छ । १७ हजार नागरिकको ज्यान लिने गरी भएको सशस्त्र विद्रोह र ‘कमरेड प्रचण्ड’ को स्कुलिङबाट हुर्किएर उनैले बेवास्ता गरेका एक ‘लडाकु’ को ‘आतंक’ फागुनयता र बढीचाहिँ पछिल्ला दुई दिनमा जनताले भोग्दै छन् ।
माओ अनुसरणको क्रान्तिका नाममा हिजो जे घटना गराइयो, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको सबैभन्दा भत्र्सनायोग्य र निकृष्ट कार्य हो । चारजनाको ज्यान लिने र जनतालाई विचारको सट्टा बमको आतंकमा बाँध्ने कार्य यतिबेला नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाले गरिरहेको छ । र, मूकदर्शक छ, राज्य संयन्त्र । स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने निरीह बनेको छ, सुरक्षा संयन्त्र ।
ससाना कुरामा बोलिरहने र प्रतिक्रिया दिइरहने प्रधानमन्त्री वैज्ञानिक समाजवादको नाममा भएको आतंकबाट चारजनाको ज्यान जाँदासम्म औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् । गृहमन्त्रीले आन्तरिक सर्कुलर गर्नबाहेक जनतालाई ढुक्क हुन आह्वान गरेका छैनन् । किन ? जनतामा प्रश्न छ, यतिबेला । र, जवाफ दिने सामथ्र्य छैन, राज्य संयन्त्रसँग ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रै विगतको इतिहासले भन्छ– देशमा ठूला आपराधिक घटना हुँदा गृहमन्त्रीले सार्वजनिक चासो व्यक्त गर्छन् । जनतालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन ढाडस दिन्छन् । तर, हाम्रा गृहमन्त्री, राज्य छ भन्ने अनुभूत गराउन नसक्ने अवस्थामा कसरी पुगे, विषय गम्भीर छ ।
चौतर्फी बम पड्काएर आफ्नै नागरिक आतंकित हुँदा मैलै पड्काएको भन्ने हिम्मत किन गर्दैनन् ‘कमरेड’ नेत्रविक्रम उर्फ विप्लव ? उनको आह्वानमा आज मुलुक बन्द छ । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा गराइएका विस्फोटमा उनका कार्यकर्ताको संलग्नता छ या छैन भन्न उनले किन यति समय लगाए ? के उनी राज्यसँग शक्ति र सत्ताको बार्गेनिङमा छन् ? होइन भने उनले किन लिँदैनन्, यी सब आतंकित पार्ने घटनाको जिम्मेवारी ?
अर्को प्रश्न उत्तिकै अनुत्तरित छ, कम्तीमा १२ वर्ष सशस्त्र विद्रोहको सामना गरेको अनुभव छ, सशस्त्र प्रहरीसँग । तर, एउटा बम डिस्पोज गर्न पनि किन सेना नै सडकमा उतारिरहनुपर्छ मुलुकले ? के यो फौज यति ‘काम नलाग्ने’ भइसक्यो ? जनताले यतिबेला उत्तर खोजेका छन् ।
र, त्यो उत्तर अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र हिजो नेत्रविक्रमसँगै १२ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले दिनुपर्छ ।
अब अति भइसकेको छ ! अदूरदृष्टिको परिणाम जनताले विप्लव समूहको नाममा भएको आतंकमार्फत भोगिसके । अब राज्यसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन् । विप्लव समूहलाई आतंककारी घोषणा गरेर फौजी कारबाहीमार्फत निमिट्यान्न पार्ने वा तत्काल वार्ताबाट समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने । तर, यसका लागि तत्काल विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
बम आतंक मच्चएर चुप बस्ने राजनीतिक शक्ति हुँदैन । हिजो एउटै विचार समूहमा रहेर राजनीतिक उद्देश्य बोकेका शक्तिलाई कमजोर र आतंकवादी ठान्ने सत्तासीन मानसिकता पनि बदलिनुपर्छ ।
१२ वर्षसम्म मुलुकले जे भोग्यो, अब त्यो दोहोरिनुहुन्न । फेरि यसो भए जिम्मेवार दलका नेता र हिंसात्मक बाटोमा क्रमशः जाँदै गरेका विप्लव नै यसका कारक हुनेछन् । तत्काल संवादका लागि सरकारले आह्वान गर्ने, विप्लवले आतंकका सबै गतिविधि रोकेर तत्काल बिनासर्त वार्तामा बस्ने र मुलुकलाई निकास दिई सामूहिक रुपमा समृद्धि मार्गमा अघि बढ्नेबाहेकको विकल्प अब राजनीतिक र सामाजिक दुवै रुपमा छैन ।
दुवै पक्षलाई चेतना भया ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १४, २०७६, ०४:१०:००